Oromoon waan barbaadu beeka – Oromedia
Home » Oduu » Oromoon waan barbaadu beeka
(Oromedia, 2 Guraandhala 2017) Oromiyaatti Bakka bu’aa TPLF kan ta’e Obbo Lammaa Magarsaa gidduu kana waan gaaffii fi mirga Oromoof dubbatu fakkaatee dhiyaatus, gaaffii Oromoof deebii kennuu akka hin dandeenye ibsame.
Ob Lammaa Magarsaa, Oromiyaatti Bakka Bu’aa TPLF
Ob Beekan Gulummaa, Hayyuu Hogbarruu fi Afaan Oromoo
Akka odeessa marsaalee hawaas-qunnamtii irraa mul’atutti, Ob Lammaa Magarsaa “yeroo dubbatu waan torbanuma tokkotti Wayyaanee biyya sanaa baasee Oromiyaa bilisoomsu fakkeesse,” kan jedhe Hayyuu hogbarruu fi Afaan Oromoo, Beekan Gulummaa ti.
“Haasaasaa al-lama dhaggeeffadheera,” kan jedhe Ob Beekan, dubbichi summii dammaan makaa akka ta’e ibsuun haasicha jabeessee qeeqe.
“Garbummaan nurra bubbulte jedhe. Ijaaramuu qabna jedhe. Oromiyaa keessatti Warraaqsa (Revolution) guddaan tokko dho’uu qaba jedhe. Sabboonummaan dagaaguu qaba jedhe.”
” Maal namichi kun nimaraatemoo TPLF n biyyaa baateetti jedheen shakke,” kan jedhe Ob Beekan, dubbichi garuu summii dammaan makamee Qeerroof dhiyaate akka ta’e saaxile.
“Dubbiin garuu sanaa ol taati. 1ffaa. Gooftoliisaatu akkas jettee afaan ABO fakkaatu kanaan yoo dubbatte salphaatti OPDO’n amma duute kun lafaa kaati jedhaniitu,” kan jedhe Ob Beekan, muuxannoo kanaan dura Oromiyaa keessatti arges, “Obboo Abbaa Duulaas yeroo jalqaba gara aangoo pirzedaantummaatti dhufanii turan olii hamma gadiitti Minaasee jedhamuun shakkamanii turan. Booda keessa kan Oromoon dhaga’uu barbaadu akkuma Lammaan kaleessa dubbatu kana ..Sabboonummaa..Bilisummaa..qebexershoo jennaan harka walitti reebaa turre, yunivarsiitii keessa teenyee jechuudha,” yaadachiise.
“Ammammoo kaleessa kana Lammaan miseensotuma muraasa warra gaaffii ciccimaa gaafachuu hindandeenye walitti bu’atee (kan gaaffii gaafatan mana hidhaa jiruka….) harka walitti reebsifataa ture. Raajiidha. Akkasiin gowwoomsanii Oromoo garraamii kana alagaa jalatti cabsuudhatu barame mitii?” jechuun gaafate.
Itti dabaluunis, waan ijoolleen qaroon dhaloota qubee gaafatan Ob Lammaa Magarsaaf tarreessee jira.
Obbo Lammaan mee dura
(1) bulchinsa Oromiyaa Waraana TPLF irraa haa fuudhanii jara camp’tti haa galchan.
(2) hidhamtoota gaaffii Oromummaa fi dinagdee gaafatanii TPLF hiitee haa hiiksisan.
(3) Bulchinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa jala haa galchisiisan.
(4) Liyyuu Police Somaalee Oromiyaa weeraraa turte nu irraa dhaabanii daangaan Oromiyaa akka kabajamu haa godhan.
(5) Bulchinsi Walloon durii Oromiyaa jala akka galu haa godhan.
(6) Mirga dinagdee uummatni Oromoo Tigree waliin practically wal qixa akka qabaatu haa godhan.
(7) OPDOn Status TPLF kun EPRDF keessatti dhaaba KORMAA ta’e kana dura dhaabbatee akkuma TPLF Tigray keessatti qabu sana Oromiyaa keessatti OPDOn murteessaa ta’uu fi laaqama TPLF Oromiyaa keessatti gootu guutuutti nu irraa dhaabuu dha.
(8) Afaan Oromoo afaanota biraa waliin wal qixatti afaan Federal Ethiopia akka ta’u gochuuf dhaabbatanii hojiin mirkaneessuu dha.
(9) Gibira Oromiyaa keessaa uummataa fi Businesses irraa fuudhamu 75% akka dagaagina Oromiyaaf bulchinsa Oromiyaa keessatti hafu taasisuu dha (Ofii iyyoomaa deemuu fi Tigray gabbisuu fi dagaagsuun haa dhaabbatu!).
Akka Ob Beekan ibsetti, Ob Lammaan yoo gaaffilee kunneen deebise, OPDOnis yoo ejjannoo kana qabatee deebii malchiisu kenne, ummata Oromoo biratti akk fudhtamuu, “sun hundi taanaan 100% OPDO waliin gara fuul duraatti sosso’amu,” ta’uu ibse.
Ob Beekan yeroo yaada isaa goolabu gorsa lammummaa kennuun “yoo sobdee saba afaan faajjessitee bittaa wayyaanee nurra bubbulchuuf afaan dammaan as baate yoo taate Waaqayyo inni guddaan marcuma irra teesse kanarra sintursiin. Yoo dhugumaatti onnee Oromoummaaf akkas akka hamaaketaa harqita yoo ta’emmoo bilisummaa Oromoo argi…murna bicuu dhiiga saba keenyaa xuuxaa jirtu kaans dhabamsiisuuf carraa argatte kanatti gargaarami seenaa dalagi du’i,” ittiin jedhe.
Beekan Gulummaa dhaloota Qubee marsaa hawaas-qunnamtii irratti bal’inaa fi itti fufiinsaan falmaa gaggeessaa jiran keessaa, hayyuu, beekamaa dha.
Previous: Gadaan Booranaa 71ffaa Baallii Kennaa Jira
Next: የአቃቤ ህግ የቪዲዬ ማስረጃዎች በእነ ጉርሜሳ አያኖ መዝገብ ቀረቡ፡፡